कास्कीबाट चुनाव लड्न वामदेवलाई प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रस्ताव ! – SunkoshiNews
UML leader Bam Dev Gautam speaks to media duringatea receiption organised at the Presidential Palace, on Monday, October 16, 2017. Photo: RSS
यस अघि नेता गौतम काठमाडौं, डोल्पा, प्युठानलगायतका जिल्लाबाट चुनाव लड्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । तर, पाटीभित्र सहमति जुटन नसक्दा उपचुनाव लड्ने उनको चाहना अधुरै रहेको थियो । विगतमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले नै गौमतलाई चुनाव लड्न रोकेको आंशका पनि गरिएको थियो । तर, ती आंशका चिर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आफै नेता गौtमलाई चुनाव लड्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सनबाट ५३२ घरधुरी प्रभावित हुने, तामाकोशीमा हात्तीटार र सुनकोशीमा घुमाउने चैनपुरसम्म डुब्ने